December 2, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Somali News December 2, 2019
New terrorism indictment for US man linked to Somali group Washington PostSii akhriso
Cayaaraha December 2, 2019
(Yurub) 02 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey isku aadka wareegga saddexaad ee tartanka FA Cup-ka, waxaana ka soo baxay kulamo xiiso leh. Liverpool ayaa kulan adag soo dhoweynaysa naadiga Everton, halka Manchester United ay markale la ciyaarayso Wolves. Chelsea ayaa qaabilaysa Naadiga Nottingham Forest, Kooxda Manchester City ayaa iyaduna nasiib ku leh in lagu beegay naadiga Sii akhriso
Ethiopia News December 2, 2019
Discovering Ethiopia’s ancient cave churches on a tedious trek that paid off The TelegraphSii akhriso
(Paris) 02 Dis 2019. Majalada France Football ayaa dhammaystirtay inay shaaciso sida ay kaalimaha u kala galeen oo ay u kala sare mareen xiddigaha ku tartamaya abaal-marinta sanadkan. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa ugu dambeyn caawa looga dhawaaqay xiddiga ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or 2019 waxaana markiisii lixaad loo caleemo saaray Sii akhriso
(Yurub) 02 Dis 2019. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa caawa lagu guddoonsiiyey Lionel Messi abaal-marinta laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or 2019. Waxay ahayd markii 64-aad oo abaal-marintan la bixiyo, waxaana markii ugu horreysay la guddoonsiiyey Sir Stanley Matthews sanadkii 1956-kii. Kabtanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi Sii akhriso
(Yurub) 02 Dis 2019. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa caawa abaal-marin lagu guddoonsiiyey goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson Becker. Robert Lewandowski ayaa lagu casuumay inu abaal-marinta Yachine Trophy gacanta u geliyo goolhayaha lambarka 1-aad ee Kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil. Waxaana Alisson uu noqday goolhayihii ugu horreeyey ee Sii akhriso
(Yurub) 02 Dis 2019. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa caawa ka socda xafladda lagu bixinayo abaal-marinta laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or , waxaana haatan Matthijs de Ligt lagu guddoonsiiyey abaal-marinta Kopa Trophy 2019 ee da’yarka ugu fiican Adduunka. Waxa uu Daafaca Juventus ee Matthijs de Ligt abaal-marintan Kopa Trophy Sii akhriso
(Yurub) 02 Dis 2019. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa caawa marti galin doonta xafladda lagu bixinayo abaal-marinta laacibka ugu fiican kubbada cagta adduunka ee Ballon d’Or iyadoo haatanba qeybaha hore ee xafladdu ay bilaabatay. Tani waxa ay noqon doontaa markii 64-aad oo abaal-marintan la bixiyo, waxaana markii ugu horreysay la guddoonsiiyey Sir Sii akhriso
(Paris) 02 Dis 2019. Majalada France Football ayaa bilowday inay shaaciso sida ay kaalimaha u kala galeen oo ay u kala sarreeyaan xiddigaha ku tartamaya abaal-marinta sanadkan. Magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska ayaa ugu dambeyn caawa looga dhawaaqi doonaa laacibka ku guuleysta abaal-marintan, laakiin Majalada bixinaysa abaal-marinta xiddiga ugu fiican ayaa Sii akhriso
Soomaaliya December 2, 2019
Muqdisho-(SONNA)-Wafdi Saraakiil ah oo uu hoggaaminayo Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed , Janaraal; Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), ayaa Maanta gaaray Dalka Jabuuti. Taliyaha ayaa inta uu Jabuuti joogo waxa uu tababar u soo xiri doonaa Cutubyo ka tirsan Ciidanka Booliska oo halkaasi lagu leylinayay Bilihii lasoo dhaafay. Jabuuti ayaa ka mid ah Dowladaha qeybta ka ah Sii akhriso